Tilmaanta waalidiinta ee bilaashka ah ee sawir-qaadaha internetka - The Reward Foundation
Blog Tilmaamaha Waalidka ee Tilmaamaha Pornography
Tilmaamaha Waalidka ee Tilmaamaha Pornography
adminaccount888 11th November 2019 Education, Caafimaadka, News Latest
Waaliddiinta iyo daryeeleyaashu waa tusaalaha doorka ugu muhiimsan iyo isha hagista ee carruurta. Qiyaas ahaan markay qaan-gaadhnimada yihiin, carruurtu waxay si gaar ah u xiiseeyaan galmada waxayna rabaan inay wax bartaan intii suurta gal ah. Tani waa sababta dabeecadda koowaad ee koowaad ay tahay soo-saarista waxaana loo qorsheeyay inaan diiradda saarno, diyaarna u nahay ama maya. Internetka waa meesha ugu horeysa ee caruurtu jawaabta raadiyaan.
Helitaanka bilaashka ah, qulqulka qaawan, sawirrada qaawan ee sawir-qaaddadu waa mid ka mid ah, tijaabooyinka bulsheed ee aan xadidanayn ee weligood taariikhda aan laga soo saarin. Waxay ku dartay noocyo badan oo dabeecado qatar leh maskax hore u khatar galineysay. Fiiri fiidiyowgaan gaagaaban si aad wax badan uga sii ogaato waxa ku saabsan maskaxda dhalinyarada Talobixinta waalidiinta ee dhakhaatiirta neerfaha.
Waxaan rajeynaynaa in hagida waaliddiintani ay ku saleeyaan sawirada qaawan ee internetka ka caawin doonta carruurtaada inay si nabad ah ugu maraan horumarkooda galmada oo ay kuu oggolaadaan inaad noqotid waalidka ugu wanaagsan ama daryeelaha aad noqon karto.
Dhallinyarro badan ayaa sheegaya inay jeclaan lahaayeen in waalidkood ay ku dadaalaan ka wada hadalka arimahan. Haddii aysan ku weydiisan karin caawimaad, xaggee bay aadi doonaan?
Arag tani musawir soo koobid cawaaqibta caadiga ah ee isticmaalka xad dhaafka ah.
Websaydhka ugu weyn uguna caansan Pornhub waxay kor u qaadeysaa fiidiyoowga walaaca ku abuura sida galmada galmada, xarig, jirdil, kufsi iyo gangbangs. Jinsi waa mid ka mid ah noocyada ugu dhaqsaha badan ee kobaca sida waafaqsan Pornhubwarbixinnada gaarka ah. Intooda badani waa bilaash oo waa sahlan tahay helitaan.
Daqiiqadan 2, oo dhalaalaysa animation waxay bixisaa dulmar guud. Waad u tusi kartaa carruurtaada sidoo kale inaysan ku jirin waxyaabaha qaawan.
Daqiiqaddan 5-daqiiqo video waa qayb ka mid ah dokumentiga ka socda New Zealand. Waxa ku jira neurosurgeon-ka oo sharxaya sida balwadu u ekaato maskaxda oo u muuqata sida ay ugu egtahay maandooriyaha maandooriyaha.
Hadalkaan 'TEDx' ee uu sameeyay Professor Gail Dines “Ku barbaarinta dhaqan galmo leh”(13 minins) waxay ku sharraxaysaa siyaalo cad oo muuqaal ah sida fiidiyowyada muusikada, goobaha sawirada iyo warbaahinta bulshada ay u qaabeeyaan galmoodka carruurteenna maanta.
Halkan waxaa ah sheeko xiiso leh Tedx (Xiddada 16) oo loo yaqaan "Siddee U Qaadi Doontaa Porn Skews?"By a hooyada American iyo barayaasha jinsiga Cindy Pierce. Hagayaasha waalidka ayaa sheegaya sababta sheekooyinka socda ee caruurtaada ee ku saabsan porn-ka ay aad ugu baahan yihiin iyo waxa xiisahooda ka hela. Hoos ka eeg macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo yeesho wadahadaladaas.
Caruurta ilaa lix jirka ah waxay galaangal u leeyihiin qaawan. Carruurta qaarkood ayaa xiiseeya oo aad u raadsada wax intaa ka sii badan, qaarna waa ku murugaysan yihiin oo riyooyinku waa qarow. Sheyga culus ee qaangaarka ah kuma habboona carruurta da 'kasta ha noqotee sababtoo ah marxaladooda koritaanka maskaxda. Waa tan a Warbixin cusboonaysiinta ee 2017 ee loo yaqaan "... Ma ogeyn inay caadi ahayd in la daawado ..." baaritaan tayo iyo tiro leh ee saameynta sawirrada qaawan ee internetka ku saabsan qiyamka, aragtida, aaminsanaanta iyo dabeecadaha carruurta iyo dhalinyarada. ”Waxaa laga soo qaatay Middlesex Jaamacadda oo ay dhiseen NSPCC iyo Wakiilka carruurta ee England iyo Wales.
Tilmaamaha ugu sarreeya ee la hadalka carruurta
"Ha canaanan hana xishoonin" cunug loogu daawado qaawan. Meelkastaba waa khadka tooska ah, lagusoo bandhigo warbaahinta bulshada iyo fiidiyowyada muusikada. Way adkaan kartaa in laga fogaado. Ilmaha kale waxay u gudbiyaan si qosol ama bravado ah, ama waxaa dhici karta in cunuggaagu ku turunturoodo. Waxaa laga yaabaa inay dabcan si firfircoon u raadiyaan sidoo kale. Kaliya ka mamnuucida cunuggaaga daawashada waxa kaliya ee ay ka dhigeysaa mid tijaabiya, maxaa yeelay sida hadalka hore uu yidhi, 'miro la mamnuucay dhadhanka ugu macaan'.
Ka dhig khadadka isgaadhsiin furan sidaa daraadeed waxaad tahay ugu horeeysii wicitaan si aad ugala hadasho arrimaha ku saabsan porno. Carruurtu waxay dabiici ahaan u xiiseynayaan galmada da 'yar. Porno-ka internetka ayaa u muuqata sida qabow si ay u bartaan sida loo wanaagsanaado galmada. Daacad iyo daacadnimo ku saabsan dareenkaaga gaarka ah ee ku saabsan suuqyada. Tixgeli inaad ka hadasho laxiriirtaada adigoo ah qof dhalinyaro ah, xitaa haddii ay dareemeyso raaxo la'aan.
Carruurtu uma baahna hal hadal weyn oo ku saabsan galmada. Waxay waxay u baahan yihiin wada hadalo badan waqti ka badan inta ay sii marayaan sanadaha dhallintayar. Midkastaba ha ahaado mid da 'ahaan ku habboon, caawimaad weydiiso haddii aad u baahatid. Aabaha iyo hooyooyinka labadooduba waxay u baahan yihiin inay ka ciyaaraan door waxbaridda naftooda iyo carruurtooda ku saabsan saameynta farsamada maanta.
Ka caawi wadahadalkaas adag
Borofisar cilmu-nafsiga hore, qoraa iyo hooyo, Dr Gail Dines, waa aasaasaha Dhaqanka Dhaqaale-Bulsheedka. Eeg hadalkeeda TEDx kor. Iyadu iyo kooxdeeda waxay soo diyaariyeen aalad-ku-tababarasho ugu fiican oo lacag-la'aana, taas oo ka caawin doonta waalidiinta inay barbaariyaan carruurtoodu u adkaysi badan tahay. Sida loo yeesho wada hadalka: fiiri Dhaqanka Wareegsan Barnaamijka Waalidiinta.
Kani waa buug cusub oo uu qoray Colette Smart, oo ah hooyo, macallin hore iyo cilmi nafsi yaqaan oo loo yaqaan “Way fiicnaan doonaan". Buuggu wuxuu leeyahay tusaalooyin 15 ah oo sheekaysiga aad la yeelan karto carruurtaada. Websaydhku sidoo kale wuxuu leeyahay wareysiyaal telefishan oo wareysiya isla markaana qoraaga wadaagaya fikradaha muhiimka ah.
Talooyin sare oo ku saabsan telefoonnada gacanta
Dib-u-dhigi cunugaaga xitaa smartphone ama kiniin in alla intii suurtagal ah. Taleefannada gacantu waxay ka dhigan tahay inaad xidhiidhka la lahaan karto. In kasta oo ay u ekaan karto abaalmarin shaqo adag oo dugsiga hoose ama dugsiga hoose ah in aad cunuggaaga u siiso taleefan casriga ah marka uu galayo dugsiga sare, fiirso waxa ay ku sameyneyso gaaritaankooda aqooneed bilaha soo socda. Ilmuhu runtii ma u baahan yihiin 24-saacadood maalintii maalintii si ay u helaan internetka? In kasta oo ay carruurtu heli karaan shaqooyin badan oo laylis ah oo khadka tooska ah ah, ma loo isticmaali karaa madadaalo xaddidan daqiiqadaha 60 maalintii, xitaa tijaabo ahaan? Waxaa jira barnaamijyo badan si loola socdo isticmaalka internetka gaar ahaan ujeeddooyinka madadaalada. Caruurta ah 2 sano iyo wixii ka yar waa inaysan isticmaalin shaashad gabi ahaanba.
Diidi internetka habeenkii. Ama, ugu yaraan, ka qaad dhammaan taleefannada, kiniiniyada iyo aaladda ciyaarta qolka jiifka canuggaaga. La'aanta hurdo soo celinta ayaa walaac badan, murugo iyo walaac ku haya carruur badan maanta. Waxay u baahan yihiin hurdo buuxda oo habeenkii ah, sideed saacadood ugu yaraan, si looga caawiyo iyaga inay dhexgalaan barashada maalinta, ka caawiyaan iyaga inay koraan, macno u yeeshaan shucuurtooda oo ay wanaag dareemaan.
U ogoloow carruurtaada taas Porn waxaa loogu talagalay by dhowr dollar billaabay shirkadaha tiknoolajiyada si ay u isticmaalaan "lakab" iyagoon ka warheynin inay sameystaan ​​caadooyin u horseeda inay dib ugu soo noqdaan wax badan. Waxay kuxirantahay oo keliya fiirogaarkooda. Shirkaduhu waxay ka iibiyaan oo ay la wadaagaan macluumaad ku saabsan rabitaanka iyo dhaqankiisa isticmaaleyaasha dhinacyada saddexaad iyo xayeysiistayaasha. Waxaa loo sameeyay inay noqdaan wax qabatimaya sida ciyaaraha tooska ah, khamaarka iyo warbaahinta bulshada si ay uga ilaaliyaan isticmaaleyaashu inay soo noqdaan wax badan isla marka ay caajisaan ama walwal qabaan.
Wax ka qabashada dibad-baxyada: Carruurtu waxay marka hore u mudan karaan, laakiin carruur badan ayaa noo sheegay inay jecel yihiin waalidkood inay ku soo rogaan xannibaad iyaga oo iyaga siinaya xuduud cad. Adigu ma samaynaysid ilmaahaaga wixii nasiino ah iyaga oo ka dhigaya 'macno ahaan' qalabkooda.
Ha dareemin dambi si aad u qaadato tallaabooyin wax ku ool ah carruurtaada. Caafimaadka maskaxda iyo ladnaanta waxay aad ugu badan yihiin gacmahaaga. Isku hubso aqoonta iyo wadnaha furan si aad uga caawiso ilmahaaga inuu marayo xilligan adag ee horumarka. Waa kan talo dhakhtarka dhimirka ee carruurta.
Recent cilmi waxay soo jeedineysaa in miirayaasha miirayaasha kaliya aysan ka ilaalin doonin caruurtaada inay marin u qaadaan qaawan. Hagahan waalidiinta wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in khadadka wada-xiriirka ay u furnaadaan sidii ay aad muhiim u tahay. Ka dhigista mid ka xoog badan porn si kastaba ha ahaatee waa markasta bilaw wanaagsan oo qaas ah carruurta yaryar. Waxaa mudan in la dhigo filtarrada dhammaan aaladda internetka iyo hubinta on a joogto ah in ay shaqeynayaan. Ka hubso Childline ama bixiyahaaga internetka wixii ku saabsan talobixinta ugu dambeysa ee shaandhaynta.
Maxaa barnaamijyo caawin kara?
Waxaa jira barnaamijyo badan iyo barnaamijyo taageero. Ikydz waa barnaamij u ogolaanaya waalidiinta in ay kormeeraan isticmaalka carruurtooda. Ilaaliyaha Galiyaha ogeysiiyaa waalidiinta marka sawir laga shakiyo ay ka muuqato qalabka cunuga. Waxay ka hadlaysaa khatarta ku jirta sexting.
daqiiqad waa app bilaash ah taas oo u oggolaaneysa qofka inuu kormeero isticmaalkiisa internetka, xad u yeelo oo helo qaawan marka uu gaarayo xadkaas. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin u janjeera in ay hoos u dhigaan isticmaalkooda xaddiga xadidan. Barnaamijkan waa la mid laakiin ma ahan lacag la'aan. Waxay ka caawisaa dadka inay dib u soo kabtaan maskaxdooda iyagoo ku caawinaya jidka. Waa loo yeedhay Brainbuddy.
Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyada kale ee faa'iido u yeelan kara: Indho-indhoole; Bark; NetNanny; Mobicip; Kontroolka Waalidka ee Qustodio; WebWatcher; Norton Qoyska Hore; OpenDNS Home VIP; PureSight Multi. Waa tan maqaal iyo liiska laga bilaabo Luulyo 2019 ee PC World. Muuqaalkooda kujira liiskan kama dhigayaan oggolaansho ay bixiso The Reward Foundation. Kama helno faa'iidooyin dhaqaale ka soo iibinta alaabooyinkan.
Buugga ugu fiican suuqa ayaa waxaa leh sarkaalkeena cilmi-baarista sharafta leh Gary Wilson. Waxaan dhihi karnaa taas laakiin way dhacdaa inay run noqdaan. Waxaa loo yaqaan "Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga”. Waa hage waalidnimo weyn. Sidoo kale waa buug u wanaagsan carruurtaada inay wax akhriyaan maadaama ay leedahay boqolaal sheekooyin oo ay soo saareen dhalinyaro kale iyo halganka ay ugu jiraan majaajillada. Kuwa badan ayaa bilaabay daawashada filimka internetka ee porn-ka iyagoo da 'yar.
Gary waa macalin saynis aad u wanaagsan oo sharxaya abaalmarinta maskaxda, ama dhiirigelinta, nidaamka hab aad u fudud oo loogu talagalay dadka aan saynis ahayn. Buuggu waa casriyeyn ku saabsan caankiisa TEDx ka hadal 2012.
Buuggu waxaa lagu heli karaa waraaq, Kindle ama buugga maqalka. Waxaa la cusboonaysiiyay Oktoobar 2018 si loola xisaabtamo aqoonsiga Ururka Caafimaadka Adduunku u leeyahay qayb cusub oo cudurka lagu ogaanayo “Ciqaabta Anshax xumada Galmada ee khasabka ah". Tarjumida waxaa lagu heli karaa Nederlandays, Carabi iyo Hangari ilaa hada, kuwa kale waxay ku jiraan dhuunta.
2. Buugga dhimirka ee Dr Victoria Dunckley buugga “Dib u celi ilmahaaga maskaxda"Iyo iyada bilaash ah blog sharax saameynta waqtiga sawir aad u badan maskaxda ilmaha. Waxaa muhim u ah qorshaha waalidku samayn karo si uu uga caawiyo ilmahooda mar labaad.
Dr Dunckley maaha mid ka soocaya isticmaalka suufka laakiin wuxuu diiradda saarayaa isticmaalka internetka guud ahaan. Waxay sheegtey in ku saabsan 80% carruurta ay u arkaan inaysan lahayn xanuunka caafimaadka maskaxda ee loo aqoonsaday loona daaweeyey, sida ADHD, laba-cirifoodka, niyad-jabka, walwalka iwm. Lakiin waxa ay qabaan waxa ay ugu yeereyso 'shaashadda' electronic screen syndrome '. ' Cudurkaan wuxuu cirib-tirayaa astaamaha noocyada badan ee cudurada maskaxda ee caadiga ah. Arrimaha caafimaadka maskaxda inta badan waa la daaweyn karaa / la yareyn karaa adoo ka saari kara qalab elektaroonik ah muddo wakhti ah oo ku saabsan agagaarka 3 inta badan kiisaska.
Buuggeedu wuxuu sharraxayaa sida waalidku ay tan u sameyn karaan tilmaanta tillaabo-tallaabo ee waalidiinta iyagoo la kaashanaya dugsiga ilmaha.
Buugaagta loogu talagalay Carruurta Yaryar
"Sanduuqa Pandora waa furan yahay. Hadda maxaan sameeyaa? " Gail Poyner waa cilmi-nafsi yaqaan waxayna bixisaa macluumaad faa'iido leh oo maskaxeed iyo jimicsi sahlan si looga caawiyo carruurta inay ku fekeraan fursadaha.
"Sawirro wanaagsan, Sawirro xun"Waxaa qoray Kristen Jensen iyo Gail Poyner. Sidoo kale buug wanaagsan oo diiradda saaraya maskaxda ilmaha.
Ma aha carruurta. Ilaalinta Carruurta. Liz Walker ayaa qoray buug fudud oo loogu talagalay carruurta aadka u yar oo leh sawirro midab leh.
Khayraadka internetka ee bilaash ah ee waalidiinta
Baro wax ku saabsan caafimaadka, sharciga iyo cilaaqaadka saameynta isticmaalka qaawan ee boggaga 'Reward Foundation' oo ay weheliso talo ku saabsan joojinta.
Talo bixin bilaash ah oo laga helo hay'ad samafal ah oo ka hortagga caruurta Waalidiinta Badbaadinta
La Dagaalanka Daroogada Cusub Sida loogala hadlo carruurtaada wixii ku saabsan porn.
Halkan waa mid cusub Warbixin ka Arrimaha Internetka on ammaanka internetka iyo budhcad-badeednimada oo leh talooyin ku saabsan sidaad ilmahaaga u ilaalin lahayd markaad shabakad ka fuuli lahayd.
Talada ka socota NSPCC ku saabsan porn-ka internetka.
Loogu talagalay waalidiinta ku nool Iskootinland la xiriir Carruurta 1st.
Bogagga internet-ka ee loogu talagalay isticmaaleyaasha da'da yar
Inta badan bogagga ugu muhiimsan ee soo kabashada sida sida Yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightthenewdrug.org; U gudbi weynaanta iyo Lagu sifeeyay internetka Porn waa cilmaani laakiin waxay leeyihiin adeegsadayaal diimeed sidoo kale. Faa'iido u leh waalidiinta inay eegaan inay ogaadaan waxa kuwa soo kabsaday ay soo arkeen oo ay hadda ula qabsanayaan sidii ay ula qabsan lahaayeen.
Khayraadka ku salaysan diinta
Waxaa jira ilo wanaagsan oo loo heli karo bulshooyinka diinta ku salaysan sida Xasilloonaanta dib loo soo celiyo ee Catholics, oo loogu talagalay dadka Masiixiyiinta ah guud ahaan Mashruuca Runta Qaawan (UK) Sidee Cilaaqaadka Porn (US), iyo MuslimMatters loogu talagalay kuwa iimaanka Islaamka. Fadlan nala soo xiriir haddii ay jiraan mashruucyo kale oo ku saleysan caqiido oo aan saxeexno.
Carqalada Autism Spectrum
Haddii aad leedahay cunug loo soo qiimeeyay inuu kujiro muuqaalka cudurka Autism, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in cunugaaga laga yaabo inuu halis sare ugu jiro inuu ku xiro sawirrada qaawan ee aan ahayn carruurta dareemayaasha caadiga ah. Hadaad ka shakisan tahay inuu ilmahaagu kujiro muuqaalka, waxaa fikrad fiican ah inaad lahaato la qiimeeyay haddii ay suurtagal tahay. Ragga dhallinyarada ah gaar ahaan ASD ama baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah ayaa si aan caadi ahayn loogu matahay tirakoobka loogu talagalay dembiga galmada. Waxay ku dhacdaa qiyaastii 1% dadka tirada guud ee aad u badan 33% dembiilayaasha galmada waxay ku jiraan bandow ama ay leeyihiin dhibaatooyin waxbarasho.
Cudurka 'Autism spectrum disorder' waa xaalad dareemeedka jira laga soo bilaabo dhalashada. Maaha cilad caafimaad maskaxeed. In kasta oo ay xaalad aad ugu badan tahay ragga, haweenku sidoo kale way yeelan karaan. Macluumaad dheeri ah ka akhriso bogaggaan internetka porno iyo autism; sheekada hooyada; iyo autism: dhabta ama been abuur?
Dawladda Boqortooyada Midowday (UK) ayaa dib u dhigtay (lama kansalay) ballanqaadkeedii ahaa ilaalinta carruurta khadka tooska ah. Eeg tan warqad ka timid wasiiru dowlaha Ku-simaha Xoghayaha Isuduwaha Hayadaha Samafalka ee Badbaadada Internetka.
Ujeedada sharciga xaqiijinta da'da (Sharciga Dhaqaalaha Dijitaalka ah, Qaybta 3) waxay ahayd in laga dhigo shirkadaha ganacsiga qaawan ee ganacsiga inay ku rakibaan softiweer xaqiijinta da'da ah oo wax ku ool ah si loo xakameeyo galaangalka da'da ka hooseysa da'da 18 ee shabakadaha internetka ee qaawan ee ganacsiga. Eeg tan blog ku saabsan wixii faahfaahin dheeraad ah. Shuruucda cusub ayaa raadineysa inay ku jiraan boggaga warbaahinta bulshada iyo sidoo kale websaydhyada ganacsiga ee qaawan.
Taageero dheeraad ah oo ka socota Hay'adda Reward Foundation
Fadlan nala soo xiriir haddii ay jiraan aag aad jeceshahay in aan daboolno mawduucaan. Waxaan sii kordhin doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan boggayaga internetka bilaha soo socda. Ku soo qor wargeyskayaga wargeyska abaalmarinta abaalmarinta (bogga bogga) oo naga raac on Twitter (@brain_love_sex) ee horumarkii ugu dambeeyay.
Tilmaamaha waalidiinta ayaa la cusboonaysiiyay 11 Noofambar 2019